Min Thuta, Author at - Page2of 76
Social Media Post တွေတင်တဲ့အခါမှာ အမြဲစစ်ဆေးသင့်တဲ့အချက်များ
ယနေ့ခေတ်မှာ Social Media အသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်လာတာနဲ့အညီ Business အတော်များများကလဲ Social Media ကနေတစ်ဆင့်အပြိုင်အဆိုင်ဈးကွက်ထိုးဖောက်နေကျပါပြီ။ဒါကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Social Media post တွေတင်ရာမှာအမြဲတမ်း Check လုပ်နေသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
(2) သင့်ရဲ့ Reader တွေနှစ်သက်တဲ့ Content
Posted by Min Thuta/ Sunday November 15th, 2020/ Blog/0Comment
မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့စာဖတ်ရတာကြိုက်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး e-reader application များ
iPad ဟာ စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အခြားသောအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရန်အကောင်းမွန်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပြီး iPad အတွက်အကောင်းဆုံး e-reader app များကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ သင့် iPad ၏မျက်နှာပြင်ဟာ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရှုရန်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေပြေဖတ်ရှုနိုင်မဲ့ app တွေရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။
iPad ရဲ့အကောင်းဆုံး e-reader ကတော့ Apple ရဲ့ကိုယ်ပိုင် e-reader ဖြစ်တဲ့ iBook ပါ။ iBooks ကသင့်ကို Apple’s iBooks
Posted by Min Thuta/ Saturday November 14th, 2020/ Blog/0Comment
ဆန်းသစ်တဲ့ Design တွေဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်
ခေတ်မီတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ နယ်ပယ်မျိုးစုံမှာ သူထက်ငါ့အပြိုင် လုပ်ငန်းတွေကို Creative ဖြစ်တဲ့ Design တွေကိုဖန်တီးပြီး ကြော်ငြာတွေ၊ Promotion တွေပြုလုပ်နေကျပါတယ်။ Social Media နယ်ပယ်မှာလည်း စီးပွားရေးအတွက်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင်ရင် Content တွေကိုတော့ မရှိမဖြစ်ဖန်တီး ရမှာဖြစ်ပြီး၊ Content တွေကြီးပဲဆိုရင်လည်း Engagement က ရသင့်သလောက်မရနိုင်ပါဘူး။ Image တွေလည်းပါဝင်မှ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Image တွေကိုဖန်တီးဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေ၊
Posted by Min Thuta/ Thursday November 12th, 2020/ Blog/0Comment
2021 မှာ ပညာရှင်များခန့်မှန်းထားတဲ့ Social Media Marketing Trend များ
၂၀၂၀ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ရပ်များကိုသုံးသပ်ကြည့်ရသလောက်နောက်လာမည့် ၂၀၂၁ ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Trend ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောင်းလဲလာသလို အပြောင်းအလဲတွေလဲများစွာထွက်ပေါ်လာတာတော့အမှန်ပါပဲ။အဲ့အချက်တွေကပဲ နောက်လာမည့် Social Media Marketing လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသက်ရောက်မှုတွေကိုနားလည်စေရန် Talkwalker မှအဖွဲ့သည်မကြာသေးမီက HubSpot နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ ၇၀ နှင့်ရှေ့တန်းပညာရှင်များအား လာမည့်နှစ် ၂၀၂၁ အတွက် ပညာရှင်ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အတွေးများနှင့်ခန့်မှန်းချက်များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖော်ပြချက်တွေထဲကမှ အရေးကြီးတဲ့
Posted by Min Thuta/ Wednesday November 11th, 2020/ Blog/0Comment
Internet လိုင်းမရတဲ့အချိန်မှာ Browser တွေမှာဘာလုပ်နိုင်လဲ?
ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Internet ကိုအဓိက အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ အခါမှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ Internet လိုင်းကျနေတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ကစားနိုင်မယ့် Game တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ Internet ကိုအသုံးပြုလာတာ ကြာတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီဂိမ်းကို ရင်းနီးနေမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နေရင်း Internet လိုင်းမမိတော့တဲ့ အချိန်တွေမှာ လူကဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Chrome Browser
Posted by Min Thuta/ Tuesday November 10th, 2020/ Blog/0Comment
Marketing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Instagram Video များအကြောင်း
Instagram ပေါ်မှာ Run နေတဲ့ Business တော်တော်များများဟာ Branding လုပ်တဲ့အခါမှာ များပြားလွန်းတဲ့ Instagram Video Option တွေနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် Branding ပြုလုပ်နေကျပါပြီ။ မိမိရဲ့
ဘယ်လို Content Idea မျိုးတွေက Traffic ကောင်းကောင်း Run နိုင်မလဲ?
လူကြီးမင်းတို့ဟာ Website တည်ဆောက်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ Website Traffic ကို အဓိက အားပြုပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်တွေအတွက် Traffic ကောင်းကောင်းရနိုင်ဖို့နဲ့ ရရှိထားတဲ့ Traffic တွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို Traffic ကောင်းရဖို့အတွက် Content တွေကလည်း အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Website Traffic ကိုကောင်းကောင်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မယ့်
Posted by Min Thuta/ Sunday November 8th, 2020/ Blog/0Comment
သီချင်းနားထောင်ရတာကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့် App အချို့
ဒီတစ်ခေါက် ဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ သီချင်းနားထောင်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လုံးဝကို အသုံးဝင်စေမယ့် App တွေကိုဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ Android Device တွေမှာပါတဲ့ Speaker, Built-in Sound System တွေက Volume ကျယ်ကျယ် မထွက်လို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ သူတွေရှိရင် ဒီ Article ကိုကျော်မသွားသင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ အခုပြောပြသွားမယ့် အကြောင်းကတော့ သင့်ရဲ့ Android
သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ Marketing နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်တတ်စေဖို့ သိထားရမဲ့အချက်များ
Posted by Min Thuta/ Thursday November 5th, 2020/ Blog/0Comment
Facebook နဲ့ Instagram ကဘာတွေကွာတာလဲ?
Facebook တို့ Instagram တို့က လက်ရှိအချိန်မှာ လူသုံးများနေတဲ့ နာမည်ကြီး Social Media App တွေဖြစ်ပါတယ်။ သုံးသာသုံးနေကြပြီး ဒီ App ၂ ခုရဲ့ကွာခြားချက်တွေကို မသိတာများပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဒီ App ၂ ခုက ဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်…
Posted by Min Thuta/ Wednesday November 4th, 2020/ Blog/0Comment